पुरुष, तथापि, महिलाहरु जस्तै, प्रायः बेवकूफ चीजहरु र अविश्वसनीय गलत गल्तीहरु गर्छन। र प्रायः बलियो सेक्सनका प्रतिनिधिहरूले आफ्नी पत्नीलाई कसरी फिर्ता लिनको प्रश्न उठाउँछन्। सोभियतहरूले यो सजिलो, तर अझै पनि सम्भव छ भने, यो मामलाले यस लेखमा कोसिस गर्ने प्रयास गर्नेछ।
टिप 1. एउटा कारण पत्ता लगाउनुहोस्
त्यसैले, त्यहाँ एक तलाक थियो। पत्नीलाई कसरी फर्कने? यो अक्सर एक मानिस संग एक्लै बायाँको सोचा गरिन्छ। तर तपाईंले विभिन्न तरिकाहरू खोज्नु अघि, तपाइँलाई पत्ता लगाउन आवश्यक छ कि अलगावको कारण के थियो। पारिवारिक सम्बन्ध तोड्ने निर्णयमा महिलाको निर्णय के थियो (यो भन्न लायक छ कि महिलाहरु अत्यन्तै गम्भीर रूपमा यस्तो गम्भीर कदम जान्छ)? यहाँ मुख्य प्रश्न हो, जसको लागि मानिसले सबैलाई जवाफ खोज्नु पर्छ। अनि यो पछि मात्र, स्थिति सुधार गर्न प्रयास गर्नुहोस्, अर्थात्, पत्नी बनाउन को लागी सबै कुरा गर्न यो यो फेरि हुनेछैन वा त्यो पति परिवर्तन हुनेछ।
त्यसोभए, प्रायजसो अल्कोहल, क्रूर व्यवहार, पुरुषको पक्षमा इच्छाको कमीको कमीले महिलाहरूलाई निर्णायक कारक बन्न सक्छ। केवल तपाईंको गल्तीलाई सच्याएर, तपाईं पहिले नै आधा युद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, तपाईं कसरी यो सबै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ (पछि सबै कुरा, पुरुषहरू धेरै समयमै धेरै सम्बन्धको सम्बन्धको असरको वास्तविक कारणहरूबारे जान्दछन्)? त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्:
पत्नीलाई सोध्नुहोस् (यदि त्यस्ता अवसर हो भने), विभाजनको कारण के हो?
करीव साथीहरु बाट सल्लाह सोध्नुहोस् जो जोडी संग नजिक सम्पर्क भएको छ र उनीहरूको निजी जीवनको निश्चित नगण्य थाह थियो;
आफ्नो पत्नीको नातेदारहरूसँग कुरा गर्नुहोस् (सास, जेठा साई) र यदि सम्भव भए उनीहरूको कारण पत्ता लगाउनुहोस्।
सुझाव 2. आश्चर्य
पत्नीलाई कसरी फर्किने उत्कृष्ट सल्लाह: उसलाई आश्चर्य गर्न। तपाईं यो धेरै तरिकामा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भए, यदि महिलाले शिकायत गरे कि उनको पतिले घरमा कुनै पनि कुरा गर्दैनन्, तपाई आफ्नो घरमा मरम्मत गर्न सक्नुहुन्छ। यदि पति प्रायजसो पकाएको छ भने, तपाईं कोडित गर्न सक्नुहुन्छ। यो महिला निश्चित रूपमा मन पराउनेछ, र त्यो उनको छेउमा अर्को पक्षबाट हेर्नेछ। तथापि, तपाईं महिलालाई पनि राम्रो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ: एकसाथ बस्न र आफ्नो श्रीमतीसँग एक साँझ रोमान्टिक कि उनी सबै परिवर्तनहरूमा विश्वास गर्छन्। सुखद बनाउनको लागी, तपाईलाई सावधानीपूर्वक सोच्नु पर्छ कि महिलाले सबै भन्दा मनपर्छ र कुन कुरा सही रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ।
परिषद 3. इतिहास
पत्नीलाई कसरी फर्किने अर्को सल्लाह: सम्झनुहोस् कि उनको पतिले जितेको विजयी त्यसोभए, तपाईले आफ्नो अतीत राम्रो तरिकाले स्क्यान गर्न आवश्यक छ र महिलालाई सुलझाएर के निर्णय लिन सक्नु हुन्छ। र फेरि, यो फायदा लिनुहोस्। एक व्यक्ति बलियो, साहसी, हेरचाह हुनुपर्छ (जस्तै त्यो अक्सर डेटिङको पहिलो चरणमा छ)। यी गुणहरू आफैलाई अहिले पनि प्रकट गर्नुपर्छ। तथापि, आफैलाई एक आदर्श पुरुष बनाउँदैन , पत्नी जान्छ कि तिनीसँग काम गरिरहेका छन्।
परिषद 4. वार्तालाप
आफ्नो पत्नी कसरी फर्किने अर्को सुन्ताबारे: अर्को कुरा मात्र उनीसँग कुरा गरौं। प्रायः विवाहमा, मानिसहरू बिर्सन्छन् कि तपाईंलाई आफ्नो दोस्रो आधा पूर्णतया इमानदार हुन आवश्यक छ, कहिलेकाहीँ समस्या निको पार्ने र तपाईंको निजामान्य रोक्न आवश्यक छ। त्यो अहिले नै छ र तपाईं आफ्नो प्रिय संग केहि कुराको बारेमा कुरा गर्न आवश्यक छ। उनीहरूले मनपराएका कुराहरू पत्ता लगाउँछन्, कुन कुरा परिवर्तन गर्न चाहन्छ र सामान्यतया, उनी कसरी सोच्न सक्छन् कि त्यो स्थितिको सुधार गर्न सक्छ। तथापि, एक कुराकानीको बेला, हृदयको महिलाले अवरोध गर्न र आफूलाई अघिको औचित्यको प्रयास गर्न आवश्यक छैन, केही पनि राम्रो हुनेछैन। यो सुन्दा सुन्नु राम्रो छ, र त्यसपछि केवल तपाईंको राय भन्नुहोस्। शान्त कुराकानीमा मात्र तपाईं सत्यको अनाज पाउन सक्नुहुन्छ।
सुझाव 5. परिवर्तनहरू
तपाईंको पत्नीलाई कसरी फिर्ता लिने अर्को ठूलो टिप परिवर्तन गर्न हो। यसैले, यसका निम्ति तपाईं केही पाठ्यक्रमहरूमा जान सक्नुहुन्छ, नयाँ व्यापार सिक्नुहोस्, नयाँ शौक खोज्नुहोस्, कामको नतीजा हेर्न सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो महिलालाई देखाउन आवश्यक छ कि उनको प्रस्थान जीवन पछि बन्द भएन, यसले प्रवाह गर्दछ, र सबै चीज सामान्यतया जान्छ। तथापि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो अतिव्यापी छैन र महिलालाई साबित गर्न सुरू गर्नुहोस् कि उनी गलत थिए, उनको परिवार र यस्तो उत्कृष्ट पति छोडेर (यद्यपि यो सबै भन्दा सम्भव छैन)।
परिषद 6. योजनाहरू
यदि तपाईं आफ्नो पत्नी फर्कन चाहानुहुन्छ, त्यो भविष्यको लागि तपाईका योजनाहरूको बारेमा तपाईंलाई बताउनुपर्दछ। यो पनि काम गर्दछ। सबै पछि, प्रायः स्त्रीहरूले मानिससँग एक साधारण भविष्यलाई देख्न पाउँदैनन्, किनकी उसले मात्र योजना छैन र कलको बारेमा सोच्दैन। तपाईंको जीवनलाई सानो विवरणमा सोच्नु आवश्यक छ र तपाईंको प्रियको लागि सबै चीज प्रदान गर्नु आवश्यक छ। तथापि, तपाईंलाई सावधान रहनु आवश्यक छ र वादाहरूसँग अधिकृत छैन, विशेष गरी ती व्यक्तिहरू मात्र पूरा गर्न सम्भव छैन।
परिषद 7. बच्चाहरु
तलाक पछि आफ्नी पत्नीलाई कसरी फर्काउन, यदि परिवारका बच्चाहरु छन् भने? त्यसोभए एक महिलाले देखाउन आवश्यक छ कि बच्चा पिता संग सम्बन्ध धेरै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक छ। हामीले तपाईंको बच्चाको साथ यथासंभव हिंड्न कोसिस गर्नुपर्छ, उहाँसँग भेट्नुहोस्, कल गर्नुहोस् र कसरी पत्ता लगाउनुहोस्। महिलाहरूले सधैं यो व्यवहारको सराहना गर्नेछन्। तर यदि बाबुले आफ्नो सानो केटीमा कुनै चासो देखाएनन् भने, यो यो सल्लाह प्रयोग गर्न सम्भव छैन।
यदि एक व्यक्तिले आफ्नो पत्नी फिर्ता लिन तरिकाहरू हेर्छ भने, उसले के गर्न पनि भन्छ भनेर बताउन आवश्यक छ। त्यसोभए, त्यहाँ गल्तीहरूको एक सूची हो जुन बलियो यौन सम्बन्धका प्रतिनिधिहरूले राम्रो मनसाय बनाउँछन्, तर यस तरिकाले उनीहरूले सबै थ्रेडहरू र जलाइएका पुलहरूलाई काटेर सबैलाई फिर्ता लिन सम्भव भए।
तपाईं आफ्नो पत्नी को आँखा मा राम्रो राम्रो हेर्न कोसिस गर्न को लागि, आफैलाई एक आदर्श मान्छे (पत्नी जान्दछन् कि कसरि चीज वास्तविकता मा खडा छ, र बस यिनी सबै भव्य प्रदर्शन मा विश्वास नहीं गर्नेछन्)।
एक महिला संग कुराकानी मा, तपाईं तार्किक सबूत (महिलाहरु लाई फरक तरिकाले सोच्न आवश्यक छैन), उनीहरुको लागि मुख्य चीज भावनात्मक घटक हो, त्यसैले यो राम्रो छ र यसमा खेल्न सक्ने राम्रो छ र तपाईंको प्रेमीलाई केहि कार्यका साथ सकारात्मक भावनाको कारण)।
कुनै पनि हालतमा एक व्यक्ति एक भ्यान र भिखारीको स्तरमा डुब्न सक्दैन, प्रेमीलाई बिहे गर्न परिवारको छातीमा फर्केर जान्छ। मानिस बलियो हुनुपर्छ र कुनै पनि परिस्थितिमा बलियो-बुद्धिमानी निर्णय गर्न सक्षम हुनु पर्दछ।
तपाईं बहस गर्न सक्नुहुन्न कि पत्नी बिना, उनको पति धेरै राम्रो छ (खासकर यदि यो छैन), किनभने महिलाले यसको बारेमा सिक्नको लागि राहतको सास सार्न सक्छ।
उपहारहरू र फूलहरूसँग तपाईंको प्रिय भर्न यो सिफारिस गरिएको छैन, यो सम्भव छैन कि महिलाहरु लाई एक अर्कालाई समझाउन र केवल भौतिक घटक को बावजूद मानिसलाई प्रदान गर्न को लागी केहि पनि छैन।
यदि तलाक थियो भने, मानिसले आफ्नो उपस्थितिको बारेमा बिर्सनु हुँदैन। सबै पछि, तपाईं पनि आफ्नो प्रिय संग सडकमा भेट्न सक्नुहुन्छ, र यसका लागि तपाई सधै आकर्षक र राम्रो देखिनै पर्छ।
यो समय "म तिमीलाई माया गर्दछ" वाक्यांश दोहोर्याउन सख्त तरिकाले निषेध गरिएको छ। आफ्नो मनोवृत्ति को लागी तपाईंले चीज गर्न आवश्यक छ, शब्दहरू होइन। वास्तवमा, शब्दहरू रिक्त छन्, यदि यो सबै कार्यहरू द्वारा पुष्टि भएन भने।
तलाक नकारात्मक नतीजाहरू (ठोस मौद्रिक रकममा पराजित, एक बच्चाको मनोवैज्ञानिक तनाव)
तिमीलाई तलाकको लागि के चाहिन्छ? प्रविधि र सिफारिसहरू
12 लामखुट्टे घृणा उत्पन्न कि बिरुवाहरु
जापानी "Yamazaki" (व्हिस्की) - सुरुचिपूर्ण र बहुमुखी एकल MALT
Andre पुतली पुस्तक "मानसिक जाल": विवरण, समीक्षा र मूल्यांकन
समीक्षा, वर्णन, प्रकार, आकार, र समीक्षा: काठ बनेको सिढी लागि Balusters